စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ - ခရစ္စမတ် Countdown 50% £ 250 မှပွဲတက်နေ့စဉ်မြှင့်တင်ရေး |
စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ – ခရစ္စမတ် Countdown 50% £ 250 မှပွဲတက်နေ့စဉ်မြှင့်တင်ရေး
ဒီမြှင့်တင်ရေး 23 အကြားနေ့စဉ်တက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် – 24ဒီဇင်ဘာလတွင်ကြိမ်မြောက် 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
တစ်ဆုကြေးငွေ 50% သင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်£ 250 ၏အမြင့်ဆုံးမှသင်ပထမဦးဆုံးသိုက်တက်၏.
ဆုကြေးငွေပမာဏကိုဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိရှေ့တော်၌လျှောက်ထား 30x ၏စံအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်.
ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်. သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “အကြှနျုပျ၏အကောငျ့ကိုသမိုင်း” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆိုင်းငံ့ဆုကြေးငွေတန်းစီပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အပိုင်း.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခွအေန-25% ပွဲစဉ် Up ကို£ 1000 စေရန် Daily သတင်းစာ